“Naxariistani Waxay Ii Samaynaysaa Rajo” Islaantii Darbiga Warqada Ku Dhejisay.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
“Naxariistani Waxay Ii Samaynaysaa Rajo” Islaantii Darbiga Warqada Ku Dhejisay..
Published: November 24, 2016, 7:12 pm
(0) Comments Waxay dariiqa sudhay warqad ay ku qortay “Waxa iga lumay 20 Dinaar , qofkii helaa ha ii keeno waxaan deganahay dabaqa iyo qolka No…waayo waxaan casho siisto ma haysto.!
Qof kastaa wuu akhriyaa waxaan uu yidha “ Allah ha u soo dhoweeyo”. Laakiin Qof ayaa markuu akhriyay dareenkiisu isbedely ka dibna wuxuu ugu tegay islaantii qolkeeda, isagoo sheeganaya inuu helay 20-kii Dinaar ee ka lumay si uu u siiyo.
Markii ay ka qaadatay ayay Islaantii oohin bilowday oo ku tidhi “ Wiilkaygiiyow aniga waxba igama lumin, laakiin, waxaan la yaabay dareenkaaga”. Baahidda ayaan sheegan kari waayay. Imika warqadda ogaysiiska ah meesha ka jar.
Waxayna tidhi “ Naxariistiinu waxay ii samaynaysa rajo, waxayna ii ogolaanaysa inaan dareemo quruxda dunida. Weliga qof baahan ha dhaafin adigoo qof ladan ah. Sidaas ayay dad badani u aamusan yihiin iyagoo baahan.
« Warbixinta Ka HoreysayShirkadda Facebook Oo Kordhinaysa Shaqaalaheeda UK 50% sanadka 2017 + Sababta..	Warbixinta Xigto »Laba Kalmadood Oo Sabab U Noqday In Facebook Uu Khasaaro 2 Bilyan Iyo Badh Doolarka Maraykanka Ah	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Leave a Reply Cancel reply